Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha ee Washington wuxuu ku maal-gelinayaa $ 725,000 afar degmo - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha ee Washington wuxuu ku maal-gelinayaa $ 725,000 afar degmo
Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha ee Washington wuxuu ku maal-gelinayaa $ 725,000 afar degmo
Maalgalintu waxay taageeri doontaa teknolojiyadda miyiga, hal-abuurnimada iyo daraasadaha horumarinta ballaadhinta, iyo $ 16 + milyan oo mashruuc dhismaha tareenka ah oo la filayo inay abuurto 103 shaqo
OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) ayaa maanta ansixiyay $ 488,750 oo ah amaah dulsaar yar iyo $ 236,250 oo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha, horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalnimada dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga, shaqo abuurka iyo horumarinta ballaadhinta afar bulsho oo ku baahsan gobolka. Mashaariicda lasiiyay maalgelinta waxay kujiraan gobolada soosocda:
Gobolka Clark - $ 50,000 oo deeq ah Dekedda Ridgefield loogu talagalay mashruuca "Discovery IT3 Center". Daraasaddan waxaa ka mid noqon doona qorshe horumarineed oo istiraatiiji ah oo lagu abuurayo Discovery IT3 Center, oo ah xarun jireed oo loogu talagalay nidaamka deegaanka ee hal-abuurnimada ganacsiga. Sanduuqa CERB waxaa u dhigma $ 36,000 ilaha gudaha.
Franklin County - $ 488,750 oo deyn ah iyo $ 86,250 oo deeq ah Dekedda Pasco loogu talagalay "Mashruuca Helitaanka Tareenka ee Xarunta Warshadaha ee Reimann." Mashruucani wuxuu ka kooban yahay dhismaha tareenka lagu beddelo deyrka kala-saaridda Burlington Northern Santa Fe (BNSF), qiyaastii 500 fiit oo tareen ah, iyo isgoyska tareenka ee laga raaco Waddada Tareenka. Mashruucan ayaa la filayaa inuu abuuro 103 shaqo isla markaana abuuro $ 16,675,000 maalgashi gaar loo leeyahay. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 575,000 oo ah ilaha maxalliga ah.
Gobolka Skamania - $ 50,000 oo deeq ah Degmada Waaxda Adeegga Dadweynaha Lambarka 1aad ee Gobolka Skamania loogu talagalay "Skamania Broadband Baahan Qiimaynta iyo Daraasadda Suurtagalnimada." Tani waxay noqon doontaa daraasad suurtagal ah oo lagu dhisayo kaabayaasha farsamada gacanta ee Fibre optic County ee Skamania County. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
Gobolka Thurston - $ 50,000 oo deeq ah Nisqually Indian Qabiilka loogu talagalay "Mashruuca Suuragalnimada Xarunta Tiknoolajiyadda Nisqually." Tani waxay noqon doontaa daraasad suurtagal ah si loo qiimeeyo suurtagalnimada in la horumariyo xarun tiknoolaji ah oo ku saabsan Boosaska Nisqually Indian Tribe. Lacagta CERB waxaa u dhigma $ 16,667 ilaha maxalliga ah.
“Mashaariicda CERB waxay matalayaan iskaashi muhiim ah oo udhaxeeya gobolka iyo bulshada maxalliga ah taasoo dhalisay kor uqaadida muhiimadda dhaqaale. Mashaariicda loo ansixiyay maalgalinta waxay matalayaan dhaqamada, dhaqanka, iyo juqraafi ahaanta kaladuwan ee gobolkayaga. Markaan rajeyneyno dib u soo kabashada dhaqaalaha, CERB waxay u heellan tahay caawinta bulshada iyo dhisidda dhaqaale waara. ”
"Maalgelinta CERB waa udub dhexaad muhiim u ah soo jiidashada raasumaalka gaarka loo leeyahay iyo xaqiijinta maalgashi dheeraad ah oo kaabayaasha bulshada ah oo bulshooyinka reer miyiga ah ay u baahan yihiin inay abuuraan shaqooyin isla markaana joogteeyaan dib u soo kabashada dhaqaalaha muddada dheer," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Gobolka Washington Lisa Brown
Laga soo bilaabo 1982, CERB waxay ku dhowaad $ 203 milyan u goysay maamullada maxalliga ah ee gobolka oo dhan, maalgashi abuuraya in ka badan 36,000 oo shaqo, iyo maalgashi raasumaal oo gaar loo leeyahay oo dhan $ 5.8 bilyan - $ 29 illaa $ 1 oo ku soo noqoshada maalgashiga CERB.
Maaddaama ay tahay ilaha istiraatiijiga ah ee horumarinta dhaqaalaha Washington, CERB waxay diiradda saareysaa abuurista shaqooyinka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyadoo lala kaashanayo dowladaha hoose iyadoo maalgelinaysa horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. Horumarintani waxay dhiirigalineysaa horumarinta ganacsiga cusub iyo ballaarinta. Marka lagu daro maalgelinta mashaariicda dhismaha, CERB waxay siisaa maalgelin xadidan daraasadaha qiimeeya mudnaanta sare leh mashaariicda horumarinta dhaqaalaha.
Janea Delk, Agaasimaha Fulinta ee CERB & Xiriiriyaha Qabiilka, (360) 252-0812
Penny Thomas, Isgaarsiinta Ganacsiga, (360) 704-9489
Dekedda Ridgefield: Brent Grening, Madaxa Sare ee Fulinta, (360) 772-6611, bgrening@portridgefield.org
Dekedda Pasco: Stephen McFadden, Agaasimaha Horumarinta Dhaqaalaha iyo Suuqgeynta, (509) 537-0524, SMcFadden@portofpasco.org
Degmada Waaxda Adeegga Dadweynaha Lambarka 1 ee Degmada Skamania: John Goodman, Maareeyaha Guud, (509) 427-5126, jgoodman@skamaniapud.com
Qabiilka Nisqually Indian: Joe Cushman, Agaasimaha Qorshaynta iyo Horumarinta Dhaqaalaha, (360) 480-0536, cushman.joe@nisqually-nsn.gov
← Qalabka falanqaynta degdegga ah ee 'Excel' Ogeysiiska Kali Isha: Ganacsiga wuxuu damacsan yahay inuu ku siiyo qandaraas keliya ilo isbaheysi Washington Isbahaysiga Barnaamijyada Weerarka Galmada →